भाइरल झाँक्री बारे गाउँले यी महिलाको यस्तो खुलासा, वि’रामीहरु घरमा आएपछि बस्न थाले चि’न्ता ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
भाइरल झाँक्री बारे गाउँले यी महिलाको यस्तो खुलासा, वि’रामीहरु घरमा आएपछि बस्न थाले चि’न्ता ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
January 28, 2021 January 28, 2021 AdminLeaveaComment on भाइरल झाँक्री बारे गाउँले यी महिलाको यस्तो खुलासा, वि’रामीहरु घरमा आएपछि बस्न थाले चि’न्ता ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
मोरङ । एकाएक सबै गाउँले बि’रामी पर्दै आ.त्मा पसेर दु’ख दिन थालेपछि गाउँ नै चिन्तामा परेपछि एकाएक झाँक्रीले चमत्कार गरेपछि अहिले भाइरल बनेका छन् । करिब छ बर्ष अगाडी मृ’त्यु भएका जीवन राईको आ.त्मा गाउमा हरेक बिरामीमा पसेर बोल्न थालेपछि गाउँ नै त्र’सित बनेको थियो । बच्चादेखि वृद्ध सबै बिरामी परेपछि यस अघि पनि अन्य झाक्रीले चि’न्ता बसेर तीन दिनसम्म पनि केही पत्ता नलागेपछि केही गाउँलेहरुले अन्य धामीलाई कु.टपि.ट समेत गरेका थिए ।
चार दिन चार रात नसुती धामी बसेर ढ्याङ्रो बजाएपछी अन्त्यमा कसैले नसोचेको चमत्कार गरेका छन । ६ बर्ष पहिले मोटरसाइकल दुर्घटनामा नि’धन भएका जीवन राईको चिहान खनेर हेर्नुपर्ने भनेर झाँक्रीले भनेपछी सुरक्षाकर्मी र गाउँले बुद्धिजिबि सहित करिब दुई सय मानिसहरुले रातको १२ बजे चि’हान खन्न भनेर जङ्गलमा पुग्यो । ६ बर्ष पहिले खनेको चि’हानको कुनै निशाना नै थिएन ।
चारैतिर झार उम्रीएर केही थाहा नहुने अवस्थामा सबै गाउलेहरुले खनेको ठाउँमा मान्छे नभेटिए झाक्रीलाई त्यही खाल्डोमा पुरेर हिड्ने समेत दबाब दिएपछी झाक्रीले धेरैबेर ढ्याङ्रो बजाउदै जोखाना हेरेर एउटा ठाउँ देखाएपछी खन्न सुरु गरेका गाउलेहरु एकैछिनमा च’कित बने । त्यहाँ खनेर हेर्दा कसैले नसोचेको दृश्य देखिएपछी सबै गाउलेहरुले धामीलाई माफी मागेर सम्मान समेत गरेका छन ।
झाक्रीले कसैले नसोचेको चमत्कार गरेका छन् । उनको यो कामले बिज्ञानलाई समेत चुनौती दिएको छ । तीन सय घर भएको एउटा पुरै गाउँले झाक्रीको भब्य स्वागत र सम्मान समेत गरेका छन । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः
भोलिको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल जेठ ०१ गते शनिबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मे १५ तारिख